WIN MYO TUN - I AM WHO I AM
By ၀င်းမျိုးထွန်း on Sep 25, 2018 in Poem |0comments
လေပြေ ရေကမ်း ကန်ဘောင်လမ်းရဲ့ အနမ်းဦးမှ ထာဝရတိုင် ယုယပိုက်ထွေး တူစုံကြွေးကြော် မဝေးကြေးနော် ချစ်သူ ..
By ၀င်းမျိုးထွန်း on Oct 21, 2017 in Poem |0comments
ကမ္ဘာမြေမှာ မင်းအတွက်နေရာ အရမ်းကိုရှားပားလာပေမယ့်.. ဒီရေကြည် .. ဒီမြေဆီမှာ ဒီနေခြည်ဟာ မင်းအတွက် လင်းဖြာလို့နေခဲ့ပါတယ်.. . ကောင်းကင်ပြာဆီ ခေါင်းမော့ရင်း.. စိမ်းလန်းခြင်းရဲ့ သီချင်းကို ရဲရဲရင့်ရင့် သီဆိုလိုက်ပါကွယ်.. . အနာဂတ်ကာလက မင်းကို တောင်းတနေပါတယ်.. . ၂၁.၁၀.၂၀၁၇ (သစ်ပင်စိုက်ခြင်း အမှတ်တရ)...
By ၀င်းမျိုးထွန်း on Feb 13, 2017 in Poem |0comments
တမ်းတမျှော်ရည် ကြင်သူဆီသို့ ပို့ချီပေးပါ .. လမင်းပြာရယ်.. ရင်မှာ .. လွမ်းတယ်။ . သူက.. တိမ်စိုင် ငွေ့ငွေ့ ကြယ်တစ်ပွေ့မှာ တိုးဝှေ့မှေးစက် ချစ်တဲ့ သက်ထား အိပ်မက်လေးတွေ ချိုမြစေသား.. လှစေသား.. . 10.02.2017 (Fri)
By ၀င်းမျိုးထွန်း on Jan 20, 2017 in Poem |0comments
ဆေးစက်ကျရာ ဘဝမှာရေး လေဟာ .. နုအေးမနေခဲ့ဘူး...
By ၀င်းမျိုးထွန်း on Dec 16, 2016 in Poem |0comments
နှင်းဆိုတာ နေနဲ့တွေ့ရင် ငါ မေ့ပြစ်ရမယ်မှန်း.. ခြေမလှမ်းခင်ကတည်းက.. တွေးဆမိပါရဲ့ ဒါပေမယ့် .. ။ . အဲဒီလို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ထုတ်ပိုးထားတဲ့ ပုပ်သိုးခြင်းအချို့.. မနေ့ကတည်းက ငါ့ရင်မှာဆို့လို့နေတယ် . အိုကွယ်.. နှင်းရယ်.. ကျေးငှက်သီကြူးသံလေးတွေက မင်းကိုလွမ်းပေါ့.. မင်းကတော့ မင်းရဲ့ သေတမ်းကို မင်းပြန်ထမ်းရင်း နံနက်တွေကို ခင်းချ.. အိပ်မက်အတိုအစတွေရဲ့ကြားမှာ အားလုံးဟာ ကစဉ့်ကလျားနဲ့.. . ဘယ်လောက်ပဲ ကျယ်ပြန့်ကျယ်ပြန့်.. အတ္တဟာ.. ဘယ်သောအခါမှ သန့်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလေ . ဒီလိုပဲနေနေကြတော့မယ်ဆိုရင် ဒို့တတွေရဲ့ ရှင်သန်ချိန်ဟာ.. တစ်ရာလား.. တစ်ထောင်လား.. စတီပင်ဟော့ကင်းပြောသလိုပါပဲ.. . သေချာတာက သဘာဝနဲ့ ဒို့တတွေ စစ်ဖြစ်ရတော့မယ် သက္ကရာဇ်အလီလီ.. စစ်ချီရတော့မယ်.. . နှင်း.. သူ့သတင်းစကားကို တို့တတွေ မှားကြအောင်လား စတင်ခြင်းရဲ့အပြင်အပါးမှာ သမ္မာတရားရှိတာပဲလေ.....
By ၀င်းမျိုးထွန်း on Aug 15, 2016 in Poem |0comments
(-၁) အိပ်မက်ဦးမဟုတ်ပေမယ့် ကျနော် ရူးမတတ်ပစ်ခဲ့ရတယ် ဝေးခြင်းနီးခြင်းဆိုတာ စိတ်ဝိဉာဉ်မှာ ရှိမှမရှိတာကိုး (၁) တိတ်တိတ်လေး ဖွင့်ဖောက်ထားတဲ့ အချိန်နေရာ အတွန့်အခေါက်တွေရဲ့အခြားဖက် အဝေးဆုံးတွေက နီးပစ်ရက်ခဲ့ကြတယ်။ (ဝ) ဒီအချိန်မှာ အလင်းဟာ ဟန်ပါပါ၊ မာန်ပါပါနဲ့ ကဗျာကယာ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပေါ့
By ၀င်းမျိုးထွန်း on Apr 15, 2016 in Poem |0comments
မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ဆက်ရမယ်တဲ့လား။ တကယ်တော့ မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာ စုန်ရေတွေလိုပါပဲ . . မျောရင်မျောသလောက် မူလနေရာပြန်ရောက်ဖို့ရာ . . ဆန်ပြီး ပြန်လှော်ရတာ အရမ်း ပင်ပန်းတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပါပဲ ငါဟာ မျှော်လင့်ချက်ရဲ့ အခြားတဖက် ဘယ်သူမှမသိလိုက်တဲ့ . . ညနက်နက်တွေကို ဖြတ်သန်း သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကိုနမ်းရှိုက် ငါ့ကိုငါ တိုက်ခိုက်ရဦးမယ်။ ငါ့ဆီကိုငါ ဘယ်အချိန်ပြန်ရောက်မှာလဲ ရေအဆန်မှာ မိုးကသည်းတယ်။...